Ny CEO CEO Emirates dia maminavina ny Global Aviation: Anisan'izany ianao!
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny CEO CEO Emirates dia maminavina ny Global Aviation: Anisan'izany ianao!
Novambra 3, 2020
Vonona ny hizara i Sir Tim Clark dia fahitana, ahoana ny endrik'ireo indostrian'ny fiaramanidina amin'ny endriny amin'ny 2025?
“Ny areti-mandoza dia glitch,” hoy i Sir Tim Clark, tale jeneralin'ny seranam-piaramanidina isan-karazany indrindra. Sir Tim Clark no filohan'ny Emirates Airlines. Izy no lehilahy miasa ivelan'ny boaty mihoatra ny lohan'ny fiaramanidina rehetra.
Ny fiaraha-miasa amin'i Andriamatoa Clark irery dia mety ho an'ny rehetra amin'ny sehatry ny fiaramanidina sy ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Amin'ny 12 Novambra mpikambana ao amin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany , mpamaky ny eTurboNews, ary ny hafa Mpiara-miasa TICIC afaka mihaona amin'i Andriamatoa Clark virtoaly rehefa hanolotra ny fahitany amin'ireo mpandray anjara amin'ny Konferansa iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany sy ny famatsiam-bola amin'ny 11-13 Novambra ho avy izao.
Nilaza i Tim Clark fa hisy ny fiverenana ateraky ny fangatahana haingana kokoa noho ny aoriana, ary ny orinasam-pifandraisana dia mety hiverina matanjaka kokoa noho ny tamin'ny lasa. Hiverina ny fangatahana, noho izany dia mila mitazona ny vokatra ara-batana azy ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ary mampiasa ny fitaovany marketing mba hitazomana ny marika any an-tsain'ny mpanjifa.
Ny tsy fahampian'ny valinteny ataon'ny governemanta mirindra dia tsy manampy. Amin'ny alàlan'ny fananana metrika izay saika tsy takatry ny saina dia midika fa manohy manao ny azy manokana ny governemanta.
Betsaka ny fangatahana entana, miaraka amin'ny fanokafana zotra 70-80 entin'ny filan'ny habakabaka, izay manampy amin'ny fihenan'ny fandaniam-bola.
Andriamatoa Clark dia hanazava ny tantarany momba ny fahombiazany, ny drafiny, ary ny fahitany ny indostrian'ny fiaramanidina dia hamolavola sy hitovy amin'ny 2025 mandritra ny Fihaonana an-tampon'ny famatsiam-bola ho an'ny fizahantany ITIC ho avy amin'ny 9-11 Novambra miaraka amin'ny WTM, World Travel Market.
Ilay lehilahy ao ambadiky ny Emirates Airlines dia CEO ny Dubai dia misokatra noho ny Emirates Airlines. Emirates no kaompaniam-piaramanidina voalohany manerantany izay mitaky ny tsy maintsy hataon'ny mpandeha ny fitsapana COVID-19, ary samy hafa kely fotsiny ny zava-drehetra amin'ity mpitatitra ity.
Mpandeha 56 tapitrisa manomboka amin'ny taona 2019-2020, fiaramanidina marobe 270 ary toerana 157 manerana an'izao tontolo izao no fomba ampifandraisan'i Emirates an'izao tontolo izao sy amin'ny alàlan'ny foibeny manerantany ao Dubai.
Avy amin'ny firenena 172 ny mpiasan'ny Emirates ary hatramin'ny 31 martsa dia olona 59,519 no tao amin'ilay karama.
Tamin'ny 1984, Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, izay minisitry ny fiarovana UAE ary mpikambana ao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka mandroso any Dubai, dia nangataka tamin'i Sir Maurice Flanagan, izay mpitantana ny dnata, avy eo, hijery ny hananganana zotram-piaramanidina. Tamin'ny volana desambra tamin'io taona io dia efa nisy drafitra fandraharahana feno ary efa nofidina ny anarana "Emirates" ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka vaovao.
Andriamatoa Clark dia kintana mamirapiratra ao amin'ny Fihaonambe iraisam-pirenena momba ny fizahantany sy ny fampiasam-bola .
Raha mila fampahalalana bebe kokoa sy rohy iray hisoratana anarana ho fiderana kitiho eto
Ireo mpandahateny milahatra amin'ny fihaonana an-tampon'ny virtoaly ITIC mandritra ny W9 11-XNUMX Novambra dia vonona ny hanao manampy sy manangana ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
voatifitra sary 2020 11 02 ao amin'ny 19 44 47
Noobru Advantage Review: zava-pisotro azo antoka Nootropic Brain Booster?
Niainga hiverina ny toe-karena India taorian'ny COVID-19